फाईल स्टेज: तपाईंको भिडियो एनोटेसन र समीक्षा प्रक्रिया स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस् Martech Zone
फाईल स्टेज: तपाईंको भिडियो एनोटेसन र समीक्षा प्रक्रियालाई स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस्
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० आइतवार, नोभेम्बर 22, 2015 Douglas Karr
हामी अन्तिम दुई हप्ताहरूमा एक स्प्यान्डर भिडियोमा काम गर्दैछौं, र यो अत्यन्त राम्रो हुँदै गइरहेको छ यद्यपि यसले प्रतिभाको पाँच समूहहरू एक साथ ल्याइरहेको छ - ग्राहक, स्क्रिप्ट लेखक, चित्रकार, एनिमेटर, र आवाज माथि प्रतिभा। ती गतिशील भाग को एक धेरै हो!
प्रक्रिया को अधिकांश एक संसाधन बाट अर्को मा हस्तान्तरण गरिएको छ जब हामी प्रक्रिया मार्फत जान्छौं ताकि यो जटिल हुन सक्छ। निजी बीच, पासवर्ड-सुरक्षित Vimeo प्रकाशन, ईमेल, र एक प्रोजेक्ट प्रबन्धन प्रणाली, हामी वरिपरि उछाल गर्दै छौं र विधिवत प्रोजेक्ट पूरा गर्दै।
हाम्रो अर्को परियोजनामा, हामी केवल फाईलस्टेजको लागि साइन अप गर्न सक्छौं! फाईलस्टेज एक हो अनलाइन भिडियो एनोटेसन र समीक्षा उपकरण। यो तपाइँको ग्राहकहरू र सहकर्मीहरूसँग मिडिया सामग्री साझेदारी, समीक्षा र अनुमोदन गर्ने सब भन्दा सजिलो तरीका हो। फाईलस्टेजले भिडियो, डिजाइन, रूपरेखा, छवि र कागजात समर्थन गर्दछ। सबै ग्राहकको डाटा भण्डार गरिएको छ र सुरक्षित रूपमा अनलाइन होस्ट गरिएको छ।
तपाईं भिडियोबाट देख्न सक्नुहुन्छ, प्लेटफर्म दुबै उत्तरदायी र प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ। सबै भन्दा राम्रो, दुबै फ्रेम समय र वास्तविक स्थान अनस्क्रीनमा भिडियो एनोटेट गर्न यो सरल छ। फाईलस्टेज भर्खरै र्‍याम्प हुँदैछ त्यसैले यो बर्षको अन्त्यसम्म प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ। साइन अप गर्नुहोस् र यसलाई शट दिनुहोस्! (बुझ्नुभयो?)
टैग: फाइलस्टेजअनलाइन भिडियोअनलाइन भिडियो समीक्षा उपकरणभिडियो एनोटेसनभिडियो समीक्षा
आवाज व्यवहार विश्लेषक मार्फत ग्राहक संलग्नता वास्तविक समय मापन
जेन लिसाक (@jlisak)
म तपाईलाई यस बारे बताउन जाँदैछु, तर तपाईले पहिले नै यसको बारेमा सुन्नु भएको छ भन्ने अनुमान गरें। म यसलाई एक महिनाको लागि प्रयोग गर्दैछु, र यो अद्भुत छ! यो मलाई मन पर्छ।